नेकपाको भावी जीवन : विचारको प्राज्ञिकता कि व्यवहारिकता ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नेकपाको भावी जीवन : विचारको प्राज्ञिकता कि व्यवहारिकता ?
पुस १० गते, २०७६ - १३:१०
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन सिद्धान्तको अनावश्यक आयातबाट आक्रान्त छ । विगतमा जनताको बहुदलीय जनवादले सिद्धान्तको एकोहोरो आयात न्यूनीकरण गर्न ठूलै भूमिका खेलेको थियो । सिद्धान्तको आयातभन्दा स्वदेशमै उत्पादन गर्न जोड दिएको थियो । नेकपाको सैद्धान्तिक निरुपण हुँदै गर्दा यसको कस्तो लेखाजोखा होला ? जनताको तहमा नबुझिने ‘वाद’हरुको भुमरी सिर्जना गर्नुभन्दा जनताको बहुदलीय जनवादजस्तो भाषिकरुपमा समेत सरल र सुस्पष्ट विचार निर्माण आवश्यक छ ।
पुस १० गते, २०७६ - १३:१० मा प्रकाशित